Kutsungirira Kwakaita Kuti Vave Vakasununguka | Bhuku Regore ra2015
Rafael Pared, uyo ari kushanda paBheteri nemudzimai wake, Francia, akava muparidzi muna 1957 paaiva nemakore 18. Anoyeuka kuteverwa kwaaiitwa nematikitivha paaienda kunoparidza, vachitsvaga mukana wekumusunga pamwe chete nevaaiva navo. Rafael anoti: “Dzimwe nguva taitofanira kutiza netunzira tudiki kana kuti nemumikoto, tichisvetuka fenzi kuti tisasungwa.” Andrea Almánzar anotsanangura zvavaiita kuti vasasungwa achiti: “Taifanira kungwarira. Muushumiri taiti tikaparidza pane imwe imba tosvetuka dzimba gumi tisati taparidza pane imwe.”
Muna 1959, Trujillo ainge atonga kwemakore anoda kusvika 30, asi zvinhu zvainge zvichichinja mune zvematongerwo enyika. Musi wa14 June 1959, vanhu vainge vambotiza muDominican Republic vakadzoka vachida kuedza kubvisa Trujillo pachigaro. Kunyange zvazvo vasina kubudirira uye vamwe vapanduki vacho vakaurayiwa kana kusungwa, vazhinji vevavengi vaTrujillo vakaona kuti hurumende yake yaigona kupidigurwa, saka vakawedzera kuipikisa.
Musi wa25 January 1960, pashure pemakore chechi yeRoma ichitsigirana nehurumende yaTrujillo, vakuru vakuru vayo vakanyora tsamba vachitsutsumwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munyori wezvakaitika kare wemunyika yacho, Bernardo Vega anoti: “Kurwisa kwakaitwa muna June 1959 nevanhu vainge vambotiza muDominican Republic uye utsinye hwavakaitirwa, uye hwakazoitirwa vanhu vaigara munyika yacho vaipandukira hurumende pachivande, zvakaita kuti kekutanga chechi yeRoma ipikisewo Trujillo.”
Chinofadza ndechekuti, muna May 1960 hurumende yacho yakabvumira Zvapupu zvaJehovha kunamata zvakasununguka. Pashure pekubhanwa kwemakore akawanda, rusununguko rwakabva kumunhu wazvakanga zvisingatarisiri, Trujillo pachake, paakanga atosvorana nechechi yeRoma.